पानस्पर्मिया सिद्धान्त जीवनको उत्पत्ति के हो? | नेटवर्क मौसम विज्ञान
जीवनको उत्पत्ति। यसका बारे को सिद्धान्त अहिलेसम्म कसले ल्याएको छैन? वैज्ञानिक सिद्धान्त र इन्टरनेटमा र संसारभरिका अरबौं बासिन्दाहरूको मुखबाट उच्चारण गरिएका थुप्रै थियरीहरू छन्। मानव को उत्पत्ति को बारे मा एक उत्सुक सिद्धान्त हो Panspermia सिद्धान्त। के तपाईंले कहिल्यै उनको बारेमा सुन्नुभयो? यो एक सिद्धान्त हो कि मानव को अर्को उत्पत्ति यस ग्रह भन्दा फरक हुन सक्छ मा आधारित छ। त्यो हो, हामी ब्रह्माण्डको अर्को भागबाट आउन सक्छौं।
के तपाई सोच्न सक्नुहुन्छ कि मानव जाति विकासको पछि होमोस जातका अरु प्रजातिहरु पछि बन्न सकेको छैन र ब्रह्माण्डको अर्को भागबाट आएको हो? यस पोष्टमा हामी तपाईंलाई पानसर्मिया सिद्धान्तको बारेमा सबै कुरा भन्छौं।
1 पानस्पर्मिया सिद्धान्त कुनमा आधारित छ?
2 Panspermia का प्रकार
4 डिटेक्टरहरू र रक्षकहरू
पानस्पर्मिया सिद्धान्त कुनमा आधारित छ?
यस सिद्धान्तले सोचेको छ कि हामी महान ब्रह्माण्डको अर्को क्षेत्रमा (वा धेरै वैज्ञानिकहरूले दावी गरेको असीम) संकल्पना गरिएको हुन सक्छ। र त्यहाँ धेरै सिद्धान्तहरू र तरिकाहरू छन् जुन हामी आउन सक्छौं। जति धेरै यसमा अध्ययन गरिएको छ, यो केहि छ हामी कहिले पनि थाहा पाउँदैनौं 100% को निश्चितताको स्तरको साथ।
पानस्पेरियामा यो भनिन्छ कि मानव ब्रह्माण्डको अन्य क्षेत्रमा विकास भएको जीव हुन सक्छ र जसका जीनहरूले पृथ्वीको सतहमा पार्ने प्रभाव धूमकेतु वा उल्का पिण्ड मार्फत पृथ्वीमा प्रवेश गरेका छन। यो सम्भव छ कि यस प्रकारले, ग्रहको बाहिर के भइरहेको छ भनेर जान्न चाहेको बढ्दो आवश्यकतालाई वर्णन गर्न सकिन्छ।
जबदेखि विज्ञान र खगोल विज्ञानको विकास भएको छ, मानवहरू हाम्रो ग्रह बाहिर के छ जान्न उत्सुक छन्। त्यसकारण, चन्द्रमाको लागि यात्रा गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, मार्टे वा जान्न को लागी ग्रहहरु को के प्रकारहरु हाम्रो मा यति धेरै छन् सौर्य प्रणाली परे जस्तै Oort क्लाउड। हुनसक्छ यी सबै चीजहरू "घर जानु" को आवश्यकताबाट आएको हो।
र यो यो सिद्धान्तले सोच्दछ कि मानव जीवनले विकास गर्न सक्ने जीवित माइक्रोस्कोपिक रूपहरू मार्फत ग्रह पृथ्वीमा पुगेको छ हाम्रो ग्रह को बसोबास को स्थितिको लागि धन्यबाद। हामी उल्का पिण्ड र धूमकेतुको प्रभावका लागि बाह्य अन्तरिक्षबाट आउन सक्षम भएका छौं। एक पटक यस ग्रहको परिचय दिइसकेपछि विकासवादले मानिसहरुलाई विकास गरीयो जस्तो हामीले आज जान्दछौं।
Panspermia का प्रकार
त्यहाँ पानस्पर्मियाका धेरै प्रकारहरू छन् जुन केही वैज्ञानिकहरूले पृथ्वीमा जीवनको मूलको रूपमा रक्षा गर्छन्। यो प्राकृतिक र निर्देशित panspermia को रूप मा परिचित छ। हामी तिनीहरूको विश्लेषण गर्न गइरहेका छौं तिनीहरूका विशेषताहरू अझ राम्रोसँग बुझ्न।
यो एक हो जसमा उनले तर्क गरे कि पृथ्वीमा बनेको सबै जीवन अनियमित र सामान्य छ। थप रूपमा, यसको कारण पृथ्वीका सतहमा टुक्रिएका चट्टानहरू जीवित जीवहरू थिए। ग्रह पृथ्वी सौर प्रणालीको "बस्ने क्षेत्र" मा छ। त्यसकारण, वातावरणीय अवस्थाको लागि धन्यवाद, यसले पानी र स्थिर तापक्रम समात्न सक्छ।
साथै, वातावरण को तहहरु तिनीहरूले हामीलाई सूर्यबाट हुने हानिकारक विकिरणबाट जोगाउँछन्। यो धन्यवाद छ कि यस ग्रहमा जीवनको विकास गर्न सक्षम भएको छ।
यस प्रकारको सिद्धान्त ती अधिक साहसी र षड्यन्त्रकारी व्यक्तिहरूको लागि बढी हो। षडयन्त्र भनेको त्यस्तो चीज हो जुन पृथ्वीका लाखौं मानिसका सिद्धान्तहरूमा प्रशस्त छ। यो केको बारेमा सोच्दै छ विकास र मानव जीवन संग भयो कि सबै एक कारण छ। त्यो हो, जुन प्रक्रिया द्वारा एक उल्का पिण्ड वा धूमकेतुले पृथ्वीलाई मानव जीवन विकास गर्न सक्षम सूक्ष्मजीवहरूको साथ प्रभाव पार्छ कसैले निर्देशित गर्छ।
यस अर्थमा हामी भन्न सक्दछौं कि निर्देशित पानस्पेरमिया एक हो जसमा पृथ्वीमा जीवन कसैलाई बाध्य पार्यो र यो कुनै अनियमित प्रक्रिया थिएन। यो सिद्धान्त ती मानिसहरूलाई विभाजित गरिएको छ जो सोच्दछन् कि यो जीवनको साथ पृथ्वीमा जीवहरू सिर्जना गर्न गरिएको थियो र जसले सोच्छन् कि हाम्रो ग्रह विदेशमा जान सक्छ अन्य टाढाका ताराहरूको अन्य संसारमा आवश्यक पर्ने कार्य गर्न जारी राख्न।
यो पृथ्वीमा जीवनको उत्पत्ति केहि निर्देशित थियो भन्ने सोच्न पागल केहि हो। के उद्देश्यको साथ? भन्नुको अर्थ यो हो कि त्यहाँ अन्य धेरै टाढाका ग्रहहरूमा बौद्धिक जीवन थियो भने उनीहरू किन जीवहरूलाई यति टाढा बाँच्न पठाउँछन्? के यो सम्भव छ कि विशाल ग्रहमा पृथ्वी केवल एक मात्र बस्न योग्य ग्रह हो र यसैले उनीहरूले यसको सहारा लिनुपर्‍यो?
त्यहाँ धेरै प्रश्नहरू छन् जुन यस प्रकारका सिद्धान्तहरूलाई जन्म दिन्छन्। र के जीवनको उत्पत्ति त्यस्तो चीज हो जुन वैज्ञानिकहरूले जतिसुकै अध्ययन गरे पनि हामी १००% कहिले पनि थाहा पाउँदैनौं किनकि "कसैलाई बताउन त्यहाँ थिएन।" जस्तै तपाईले कहिले पनि थाहा पाउनु हुन्न कि मृत्यु पछि के हुन्छ, हामी पछाडि फर्काउन सक्दैनौं र समयको उत्पत्तिबाट पहिलो चीज थाहा हुन्छ।
यस सिद्धान्तलाई सत्यको रूपमा सोच्न लगाउने तथ्यहरू मध्ये एक बाह्य अन्तरिक्षमा बाँच्न सक्षम रहेका जीवहरूको अस्तित्व हो। त्यो हो, ती सूक्ष्मजीवहरू हुन् कि बाँच्न गुरुत्वाकर्षण वा अक्सिजनको अभावबाट प्रभावित हुँदैनन्। केहि ठाँउ कि धेरै स्पेस वस्तुहरु लाई मन पर्छ भ्याएजर मिसन अन्तरिक्षमा अन्य ठाउँहरूमा "बीज" फैलाउन मानवहरूको लागि निर्मित हुन्छ वा हामीलाई यहाँ पठाएकोसँग कुराकानी गर्न।
डिटेक्टरहरू र रक्षकहरू
यस सिद्धान्तका लागि दुबै डिफेन्डर र डिटेक्टरहरू छन्। उत्तरार्द्ध ती हुन् जसले सोच्छन् कि जीवित जीवहरू पृथ्वीमा उल्का पिण्डको प्रभावबाट बच्न सक्दैनन्। पहिलो, वातावरणसँग सम्पर्कमा रहँदा तापमानको चरम परिवर्तनको अर्थ हाम्रो ग्रहमा हामीले चिनेको कुनै पनि जीव यसमा बाँच्न सक्दैन।
तसर्थ, यस सिद्धान्तको चरणहरू अनुसरण गर्दै, पृथ्वीमा बाँच्नको लागि तपाईंले स्थलीय अवस्थाहरू सामना गर्नुपर्नेछ, त्यसैले यो यस्तो आयाम को प्रभाव बाँच्न सकेन।
जे भए पनि, पानस्पेरमिया पृथ्वीमा जीवनको विकासको बारेमा अवस्थित थुप्रै सिद्धान्तहरू मध्ये एक हो। र तपाइँ, तपाइँलाई अर्को सिद्धान्त थाहा छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » पानस्पर्मिया सिद्धान्त जीवनको उत्पत्ति के हो?